Nwere ike ibudata ibe weebụ maka iji offline na Chrome | Akụkọ akụrụngwa
Nwere ike ibudata ibe weebụ maka iji offline na Chrome
Dịka onye ọrụ gam akporo, ịnwere ike ịnata chrome ohuru maka sistemụ mkpanaka Google. N'etiti akwụkwọ ọhụrụ nke ụdị ọhụrụ a gosipụtara, n'echiche m, nke kachasị mkpa ma ọ bụ nke ụfọdụ na-atụ anya ya, bụ nke na-enye anyị ohere lelee ibe weebụ n'enweghị njikọ na ịntanetị. Nke ahụ bụ, ugbu a ị nwere ike ibudata ibe ịchọrọ ilele ka ị nwee ike ịgụ ọdịnaya ya ma emechaa.
Ọ bụrụ na ị na-agakarị na nnọkọ metụtara ụwa gam akporo, amaara m na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ n'ime ha ekwuolarị maka ọrụ ọhụrụ a ebe ọ bụ na ndị ọrụ maka mmepe nke Chrome na-anwale ọnwa. N'ikpeazụ ikpeazụ version nke ama nchọgharị na-ama e mepụtara na banyere ya mmepụta na-adọ otú ugbu a ndị ọrụ niile chọrọ iji ya arụ ọrụ ọhụrụ a.
55.0.2883.84 bụ ezigbo nsụgharị nke Chrome na-enye gị ohere ibudata ibe weebụ ọ bụla.
Echela na mmelite a ga - enye gị ohere ibudata ibe weebụ iji lelee ha mgbe oge na - anọghị n'ịntanetị, ya bụ, na - ejikọghị na ịntanetị, mana ị ga - ebudata egwu, vidiyo na onyonyo. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na njirimara a, ihe mbụ ị ga-eme bụ ibudata, ma ọ bụrụ na ịnabataghị mmelite ahụ, site na Google Play ụdị Chrome ọhụrụ. Ozugbo ị wụnye ya, ị nweta ya ma ị ga - ahụ a akụ na-agbada na menu, nke ị nwere ike ịnweta site na isi atọ dị na akuku aka nri ya.
Iji, dịka ọmụmaatụ, budata ibe weebụ, ihe niile ị ga - eme bụ imeghe ya na ihe nchọgharị ahụ, pịa akara ngosi nwere akara atọ iji nweta menu Chrome, pịa akara ngosi akụ ma chere ka ọ gwụchaa nbudata ahụ. Ozugbo emechara usoro ahụ dum, ị ga - eme ya nweta ngalaba Nbudata na-egosi na otu menu iji nwee ike ịhụ ibe na-enweghị njikọ na ịntanetị.
Ozi ndi ozo: Chrome
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Nwere ike ibudata ibe weebụ maka iji offline na Chrome
Na 2017 anyị ga-ahụ laptọọpụ nwere Windows 10 na Qualcomm's Snapdragon chip